Iyini iphansi likakhonkolo ophucuziwe
Iyini iphansi likakhonkolo ophucuziwe
Iyini indawo kakhonkolo epholishiwe?Iphansi likakhonkolo elipholishiwe, elaziwa nangokuthi iphansi elipholile, wuhlobo olusha lobuchwepheshe bokwelapha phansi olwenziwa nge-ejenti yokwelapha evala ukhonkolo kanye nemishini yokugaya phansi.Isetshenziswe kabanzi ezitezi ezihlukene zezimboni, ikakhulukazi phansi kwefektri kanye nezindawo zokupaka ezingaphansi komhlaba.
Empilweni yangempela, kungenzeka ukuthi abantu abaningi bake bayibona, kodwa abalazi igama eliqondile lalolu hlobo lwephansi, ngakho bangase banganaki, futhi abazi ukuthi iphansi elingaphansi kwezinyawo zabo libizwa ngokuthi usimende ophucuziwe.Eqinisweni, abantu abaningi babheka ukhonkolo ophucuziwe njengephansi le-epoxy noma i-terrazzo floor.
1. I-Epoxy floor iwuhlobo lwesitezi lapho okunamathelayo kunamathiselwe kukhonkolo ngemuva kokuthi indawo kakhonkolo imbozwe ngezingqimba eziningi, njengokubeka amathayili.Asizange sithinte ukhonkolo wangempela, kodwa ukhonkolo opholishiwe uphansi owenziwe ngokhonkolo.Lolu hlobo lwephansi luphelele, oluhluke kakhulu kune-epoxy floor.Izinto ezisetshenziswayo zokuvala ukhonkolo kanye ne-ejenti yokwelapha zingena ngqo kukhonkolo futhi zikhiqize uchungechunge lokusabela kwamakhemikhali nomhlabathi.Ngemva kokufakwa kwesihlabathi, kwakheka ukhonkolo opholishiwe ophelele.
2. Lapho isisekelo sokhonkolo esiphansi sakhiwe, inhlabathi ye-terrazzo kufanele yakhiwe kanye nokhonkolo.Ukhonkolo opholishiwe wakhiwe ngokuhlukana phezu kwesisekelo sikakhonkolo ngemva kokuqedwa.Ukuqina kokubili kuhluke ngokuphelele.
Ukhonkolo opholishiwe, ngemva kokuqinisa isitezi esivamile nge-hardener, ungapholishwa ukuze uqedele umsebenzi wokwakha.Ungakwazi futhi ukutsheka phansi ukuze uzuze umbala owufunayo nomphumela.Kule nqubo, ngaphandle kokugandaya, isikhathi sokwakha sizosindisa isikhathi esiningi.Zombili izitezi ezindala nezintsha nezingagugi zingakhiwa kalula.Ngakho-ke ukhonkolo ophucuziwe uwuhlobo lwephansi, oluhlukile ku-epoxy kanye ne-terrazzo, eyenziwe nge-ejenti yokwelapha ye-concrete sealant.
Isikhathi sokuthumela: Apr-27-2022